Raha Mampisalasala Anao Ny Fahatokisam-pirenen’i Pero, Jereo Fotsiny Ny Matso Miaramila Tiany Fatratra · Global Voices teny Malagasy
Raha Mampisalasala Anao Ny Fahatokisam-pirenen'i Pero, Jereo Fotsiny Ny Matso Miaramila Tiany Fatratra
Voadika ny 06 Aogositra 2016 18:09 GMT
Matso fankalazàna ny fitsingerenan'ny faha-194 taonan'ny Fanambaràna ny Fahaleovantenan'i Pero. 29 Jolay 2015. Sary: Galería del Ministerio de Defensa del Perú / Flickr / CC 2.0.
Mifanohitra amin'ny an'ireo firenena maro, mankalaza ny fetim-pireneny mandritra ny roa andro misesy i Pero: ny 28 sy 29 Jolay. Manamboka ny 28 ireo fety, rehefa mankalaza ny Mpanafaka Jeneraly Don Jose de San Martín nanambara ny fahaleovantenan'i Pero tamin'i Espaina ny taona 1821, ny firenena. Amin'io andro io, araka ny fomba hatrizay, manatrika Lamesa ireo Peroviana manampahefana, ary mihira ny Te Deum, miaraka amin'ny filoha sy ireo rehetra olo-manan-kaja maro ao anatin'ny mpanatrika. Miresaka amin'ny firenena avy ao amin'ny Kongresy ihany koa ny filoha, ary mahazo ireo firariantsoa tsara indrindra avy amin'ireo diplomaty sy ireo manampahefan'ny fanjakana ao amin'ny lapan'ny governemanta.
Nahitàna famindram-pahefana ihany koa ny fetim-pankalazàna tamin'ity taona ity, satria natolotry ny Filoha Ollanta Humala ho an'ny mpitarika vaovao an'i Pero, Pedro Pablo Kuczynski, ao amin'ny andrim-panjakàna, miaraka amin'ny kabinetrany vaovao, izay nanao ny voadim-panompoany ny fitondràna.
Na teo aza ny fifaliana sy ny fientanentanana ny 28 Jolay, ny andro nanaraka io no tena nandrasan'ireo Peroviana maro fatratra. Amin'io andro io, atao ny Matso Lehiben'ny Miaramila ao Pero, mampiseho ireo mpikambana amin'ireo hery mitam-piadiana sy ny polisim-pirenena. Nandritra izay taona lasa izay, natao tamin'ny endriny sy toerana maro samihafa ilay matso, kanefa, natao tao afovoan'ny Làlana Brezila io, miaraka amin'ireo mpijery sasany tonga nialoha ny niposahan'ny masoandro mba hahazo toerana tsara. Etsy an-kilany, nisafidy ny hijery mianonkanona any an-tranony ny sasany, fa tsy miady làlana hanavatsava ao anatin'ireo vahoaka—asa vita mora noho ny fandefasana mivantana ny hetsika amin'ireo fandaharan'ny fahitalavi-pirenena rehetra.
Matetika manomboka herinandro mialoha ny hetsika ireo fanomanana ny matson'ny miaramila. Tamin'ity taona ity, nanomboka ny 18 Jolay ny fametrapetrahana sy fananganana, miaraka amin'ny fanapahana ireo làlana sy fametrahana ny rafitry ny familiana làlana.
Na teo aza anefa ny lazan'ny matso, tsy ny rehetra no mitovy hevitra amin'ny ilaina azy io, ary misy mihitsy aza ireo sasany manontany ny antony hisiany.
Te Deum sy Matson'ny Miaramila. Tsy misy fomba tsaratsara kokoa hankalazana ny fahaleovantena anaty demokrasia ve? Mieritreritra aho hoe misy!
Tsy azoko ny ilaina na ny anton'ny Matson'ny Miaramila: mampiseho amim-pireharehàna ireo basy anefa ny firenentsika miatrika tsy fandriam-pahalemana be.
Kanefa, amin'ny ankapobeny, tena mankalaza ny matso ireo Peroviana. Ary tonga ora maro mialoha ireo manatrika mivantana:
Sary: Vahoaka mbola manohy mankeny amin'ny la Av. Brasil mba hanatrika ny Matson'ny lehiben'ny Miaramila .
Izao ny fientanentanana amin'izao fotoana izao, eny amin'ny la avenida Brasil, ora iray mankany amin'ny fiantombohan'ny Matson'ny Miaramila.
Matso Lehiben'ny Miaramila: Ny ‘fijery mialoha’ ny matso an-tsary https://t.co/mbyaArXzLKpic.twitter.com/MvGEXB4yrB
Araraotin'ireo mpivarotra ihany koa ilay fotona hanolorany ireo vokatr'izy ireo ho an'ireo vahoaka maro.
Zarao ny tsy aritrao amin'ny Matson'ny Miaramila, amin'ny tenifototra #MiDesfilePatrio [Ny Matson'ny Fitiavan-tanindrazako]
Ny filoha Peroviana, amin'ny maha lehiben'ny hery mitam-piadiana azy, no mitantana ny matso, izay manomboka tamin'ny tifitra tafondro, tsipoapoaka, sy tarika goavana.
Manome alalana i PPK [Pedro Pablo Kuczynski], ary manokatra ara-pomba ofisialy ny Matson'ny Miaramila.
#Perú: Tafondro 21 mba hilazàna ny fiatombohan'ny Matson'ny Miaramila nandritra ireo andron'ny fetim-pirenena pic.twitter.com/z7Yxu7kIZm
Mandeha amin'ny làlany ho eny amin'ny Matson'ny Miaramila @larepublica_pe ny vondrona mpitsoka mozika @naval_peru .twitter.com/e3siCsaSlX
Tamin'ity taona ity, voalohany tamin'ny matso ny fisian'ny fisoloan-tena avy amin'ireo firenena any ivelany.
mandray anjara tamin'ny Matson'ny Miaramila ireo mpikambana amin'ny Hery Mitàm-piadiana Boliviana, Arzantina ary Kolombiana #ElPeruImporta [Misy lanjany i Pro] pic.twitter.com/Wh2eafuldD
Teo ihany koa ireo Mpisolo tena nyPeroviana Mpampandry Fahaleman'ny Firenena Mikambana.
ireo nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ny taona 1998, nandeha tao amin'ny Matson'ny Miaramila (Sary@aaronormeno) pic.twitter.com/kOn60vxTZb
Nilahatra ihany koa ireo fikambanana sahala amin'ny Mpamono Afo, izay mpirotsaka an-tsitrapo fotsiny no mandrafitra azy.
Matson'ny Miaramila miaraka main'ny Mpamono Afo. Ampy nahatonga fitehafana sy hafa ihany koa ny fijoroan'izy ireo monja.
Fa ny ankapoben'ny matso dia nikasika ireo andiany maro samihafan'ny Hery Mitam-piadian'i Pero.
Matson'ny Miaramila. Milalao ny “voninkazo Kanelina” ny Rezimantan'ny Tafiky Maresaly Domingo Nieto.
Manao matso ny kaomandy ankehitrinin'ny Hery Mitàm-piadiana Manokana ao amin'ny VRAEM.
@PoliciaPeru iray amin'ireo tsara indrindra ny andron'ny Matson'ny Miaramila. Ny sasany amin'ireo fahaizàmanaon'ireo zandriny!
“Handeha eny amin'ny rahona aho ary hanidina🎵……”Ho an'ny tany Ray! #LosSinchis an'ny @EjercitoPeru [Miaramila Peroviana] ao amin'ny Matson'ny Miaramila.
Fiara mifono vy an'ny miaramila mandeha amin'ny Matson'ny Miaramila ho an'ny Fetin'ny Tanindrazana. pic.twitter.com/TABwoTtjnn
Hanampiana loko ara-tantara ny fizotry ny andro fankalazana, hita tao ny fiara mifono vy avy amin'ny Tchèque izay nandray anjara tamin'ny Adin'i Pero-Ekoadaoro ny taona 1941. Nanamboatra manokana ilay fiara mofono vy ireo teknisianina, noho izany afaka mandeha tsara tamin'ny matso ilay izy.
#VIDEO: Matson'ireo fiara mofono vy an'ny miaramila, mialoha ny Matso ofisialin'ny Miaramila.
Iray amin'ireo ampahany nomanina mialoha tsara indrindra tamin'ilay hetsika, ary tsy ho an'ireo ankizy fotsiny, ny matson'ireo alikan'ny polisy.
Mandeha amin'ny Matson'ny Miaramila ny borigadin'ny alikan'ny @PoliciaPeru [Polisy Peroviana].
Ny borigadin'ny alika no hetsika lehibe ho an'ny maro, tao amin'ilay Matso lehiben'ny Miaramila .
Na ny alika Peroviana misatroka matevina aza nandray anjara tamin'ny Matson'ny Miaramila.
Lasa olona fahita matetika amin'ireo tatitra anaty fahitalavitra momba ny matso tato anatin'ireo taona vitsivitsy, ilay Mpikambana amin'ny Kongresy, Jeneraly Donayre, miaramila misotro ronono. Manana tsikera maro anefa i Donayre, noho ny fanaovany tsikera ara-politika matetika diso toerana ao amin'ny haino aman-jery.
Fety Peroviana: Tsy misy Matson'ny Miaramila tsy misy fanehoan-kevitra avy amin'ny Jeneraly Donayre.
Manelingelina ny fandefasana manontolo ny Maritere sy Lorena Álvarez ny Jeneraly Donayre. 😂
Nanampy ny fanamarihana ny fiafaràn'ny matso tamin'ity taona ity taminà haidihy ireo mpikambana roa ao amin'ny Hery Mitàm-piadiana ao Pero.
¡Viva el Perú! 🇵🇪pic.twitter.com/5KEFczcAQe
Ary toy izany ny nanakatonan'izy ireo ny Matson'ny Miaramila. Ho ela velona anie Pero! 🇵🇪pic.twitter.com/5KEFczcAQe
Nanohy ny matso avy eo ireo Limeños (ireo mponin'i Lima renivohitr'i Pero) an'arivony, taorian'ny nikatonan'io tamin'ny fomba ofisialy, nifampitaona teny amin'ny Làlana Brasil ho an'ireo fankalazàna tsy ofisialy, raha niverina tany an-tobiny kosa ireo miaramila.
Noraisina tamin-tehaka ireo delegasiôna tamin'ny faran'ny matso teny amin'ny Plaza Bolognesi.
Plaza Bolognesi feno tanteraka.
Hitan'ny maro ho feno fifaliana manokana ity taom-pankalazàana ity, ary ny sasany nanao ny filoha vao voatendry, Kuczynski hoe nanana fomba tsara sy fijery vaovao ny fahitàna ny tsara ho an'ny firenena. Fa miatrika kongresy feno mpanohitra ihany ny filoha vaovaon'i Pero, izay mampanantena ny hanao fileferana ara-politika, raha tsy hiresaka afa-tsy ny kongresy ara-politika, sarotsarotra kokoa noho ny tany aloha.
This article is a version of an original text published on Juan Arellano's Globalizado blog.